Robert Weiss LCSW မှ“ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုကမသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုအခြားစွဲလမ်းမှုနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
(ယခုများအတွက်) status Quo။ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဇူလိုင်လ၌ငါပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဘလော့ဂ် တစ်ဦးကိုမကြာမီကဖြန့်ချိဆွေးနွေးခြင်း fMRI (ဦးနှောက်ပုံရိပ်) လေ့လာမှု သူတို့မူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်ပုံရိပ်နှင့်ထိတွေ့သည့်အခါသူတို့ညစ်ညမ်းပြသကြသောအခါ, လိင်စွဲ၏ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုကိုကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း, မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုကိုပြန်ပါသည်။
အဲဒီသုတေသနပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြောင်းအကြံပြု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ တည်ရှိပေမယ့်ပိုပြီးအလွယ်တကူရက်, မူးယစ်ဆေးစွဲများနှင့်လောင်းကစားစွဲတူသောစွဲ၏ပုံစံများကိုလက်ခံခဲ့သည်ဖို့အလှနျအလားတူနည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက်ထဲမှာတငျပွကြောင့်သာ။ ဤလေ့လာမှု၏ထုတ်ဝေမနှစ်က DSM-5 အတွက် Hypersexual Disorder (ခေါ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ) တို့ပါဝင်သည်ဖို့အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံးရဲ့ unexplained နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲငြင်းဆန်၏အလငျး၌အလွန်အမင်းသိသာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကဟားဗတ်ရှိနေသော်လည်းပါမောက္ခဒေါက်တာမာတင် Kafka ရဲ့ ကောင်းစွာသုတေသနပြုခြင်းနှင့်လှပသောအငြင်းအခုံပေးအပ်, အဆိုပါယားအားဖြင့်ပြန်တမ်းထိုကဲ့သို့သောရောဂါ၏မျက်နှာသာအတွက်။
ဒါဟာယားအဆိုပြုထားဒေါက်တာ Kafka ရဲ့ပယ်ချခဲ့ကြစေခြင်းငှါတွေးဆထားသည် hypersexual ရောဂါ ကြောင့်လိင်အမှန်ပင်တစ်ခုစွဲဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုသက်သေပြသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုမရှိခြင်းရောဂါ။ အမှန်တရားအတွက်ဒေါက်တာ Kafka အထူးသဖြင့်ရန်နှငျ့ ပတျသကျ. , သူ့စက္ကူတွင်ပိုမိုသုတေသနပြုဘို့လိုအပ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, ငါအတော်လေးသည်သူ၏အကဲဖြတ်နှင့်အတူသဘောတူသည်။ အဆိုပါ DSM ထဲက (ဒေါက်တာ Kafka ကဖုန်းဆက်ဖို့ကိုပိုမိုနှစ်သက်အဖြစ်, ဒါမှမဟုတ် hypersexual ရောဂါ) ဤသို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲထားရှိမည်မသငျ့သညျ။ ဒေါက်တာ Kafka မဟုတ်ဘဲဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့ကရှင်းပြသည်အဖြစ်ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, "ဟုသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဂျာနယ်များအစီရင်ခံ Hypersexual Disorder ၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ [အဆိုပါ] အရေအတွက်ကအလွန်ကြီးထိုကဲ့သို့သော Fetishism နှင့် Frotteurism အဖြစ်ပြီးသားပြဌာန်း paraphilic မမှန်တချို့၏အမှုများကို၏နံပါတ်ကိုကျော်လွန်နေပါသည်။ " ဒီတော့အဘယ်ကြောင့် ဒါကြောင့်ထွက်စွန့်ခွာ? ငါတို့သည်လည်းပိုပြီးစိတ်ကျဝေဒနာအပေါ်သုတေသနပြုခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်, posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်သည်အခြား DSM-approved ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုမလိုအပ်သလဲ? ရဲ့အစစ်အမှန်ကဒီမှာဖွစျပါစေ: အကြွင်းမဲ့အာဏာသည်ဧကန်အမှန်ဖြစ်သည့် DSM အတွက်ပါဝင်များအတွက်စံခဲ့လျှင်, စာအုပ်တစ်လက်ကမ်းစာစောင်ပါလိမ့်မယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, က "သုတေသနမရှိခြင်း" ဟုအဆိုပါယားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့် ပတ်သက်. ၎င်း၏ untenable ရပ်တည်ချက်များအတွက်ထောက်ခံမှုအဖြစ်မြှောင်ဘာကြောင်းပေါ်လာပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဆိုရင်သူတို့ကအသစ်တခုချိုင်းထောက်လိုတော့တာပေါ့။ ဒေါက်တာ Kafka ရဲ့ပြီးသားပြတ်သားစက္ကူထုတ်ဝေကတည်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ရောဂါထောက်ပံ့သုံးအရေးကြီးသောလေ့လာမှုများဖြန့်ချိခဲ့ကြ - ထို fMRI လေ့လာမှုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တစ်ဦး UCLA ရဲ့လေ့လာမှု ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း ဒေါက်တာ Kafka ရဲ့အဆိုပြုအဖြေရှာတဲ့စံတိကျစွာဆောက်လုပ်ထားမြတ်သောအသုံးဝင်သောနေကြတယ်နှင့် လေ့လာမှုအသစ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုမှာရှာဖွေနေ။
"အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု" တိကျတဲ့လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်အာရုံခံ cue ဆီသို့သူသို့မဟုတ်သူမ၏အာရုံစူးစိုက်မှု၏ပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအဘို့ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏စိတ်သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆင်းရဲသောတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်အချို့သောဖြစ်ရပ်သို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုမပြည့်စုံ (သို့မဟုတ်နှေးကွေး) စာမျက်နှာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါဥပမာ, မူးယစ်ဆေးဆီသို့တစ်ခုအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, ပတျဝနျးကငျြ, Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမပြည့်စုံသို့မဟုတ်နှေးကွေးမှတ်ဉာဏ်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးခန်း၌တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲထားကော်ဖီစားပွဲပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် paraphernalia ရှိပါတယ်လျှင်တနည်းအားဖြင့်ကစှဲလမျးသူအကြာတွင် alacrity နှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားနှင့်အတူမူးယစ်ဆေး, အ paraphernalia နှင့်ကော်ဖီစားပွဲမှတ်မိနိုင်လိမ့်မည်ဟုယူဆရသည် ။ သို့သော်သူသို့မဟုတ်သူမမှာရှိသမျှကိုအိပ်ရာ၏အရောင်ကိုမှတ်မိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။ ယခုအသစ် လိင်စွဲ-အာရုံစူးစိုက်သုတေသနပြု, ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ် (ဗြိတိန်) မှာကောက်ယူ, လိင်စွဲအလားတူအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုဖော်ပြရန်ရှိမရှိမှာ, ဒါပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်. ထက်မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုကြည့်ရှုသည်။ လေ့လာမှုမှာသုတေသီ (ခဏကရှင်းပြခဲ့သည်) က dot စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်သုံးပြီးကျန်းမာတဲ့စမ်းသပ်ဘာသာရပ်များမှ Self-ဖော်ထုတ်လိင်စွဲ၏အုပ်စုတစုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ စွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာစမ်းသပ်ဘာသာရပ်များအသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်, လိင်ကွဲအထီးရှိကြ၏။ သီးခြားသတ်မှတ်ချက်ထည့်သွင်း: 18 နှစ်ရှိပြီထက်လျော့နည်းဖြစ်ခြင်းဟာပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါသို့မဟုတ် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲထက်အခြား) တစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲများနှင့်လေးနက်သောစိတ်ရောဂါမမှန်ရှိခြင်း။ အဆိုပါလေ့လာမှုတစ်ခုစီကိုလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်နှစ်ခုကျန်းမာဘာသာရပ်များစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
အသုံးပြုသွားမည်အဆိုပါအစက်စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များကီးဘုတ်ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့လက်ဝဲနှင့်လက်ယာက "s" ကိုကျော်အညွှန်းကိန်းလက်ချောင်းများနှင့် "ဌ" အက္ခရာနဲ့ကွန်ပျူတာမှာထိုင်တော်မူ၏။ တစ်ဦးကဗဟို fixation ပုံရိပ် (ကပေါငျးလက်ခဏာ) တစ်ဝက်ကိုတစ်စက္ကန့်နှင့်ဒုတိယအကြားများအတွက် screen ပေါ်မှာထင်ရှား၏။ ထိုအခါနှစ်ခုဓာတ်ပုံများလက်ဝဲဒါမှမဟုတ် screen ၏ညာဘက်ခြမ်းဖြစ်စေအပေါ်တစ်ဦးအစိမ်းရောင်အစက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် .15 နှင့် .1 စက္ကန့်အကြားများအတွက်ဗဟို fixation ပုံရိပ်ကနောက်တော်သို့လိုက်, .3 စက္ကန့်, မျက်နှာပြင်ပေါ်တစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ်တဦးတည်းထင်ရှား။ , အစိမ်းရောင်အစက်သည်ထင်ရှားသောအခါ, စမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်များ 'dot ပေါ်တက်ပြသခဲ့သည်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်၏အရာဘက်ပေါ် မူတည်. မှာ "s" ဒါမှမဟုတ် "ဌ" key ကိုဖြစ်စေဖိ။ တုံ့ပြန်မှုမတိုင်မီအစက်မှပြသထားသောဓာတ်ပုံများကျန်းမာဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်လိင်စွဲပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းစိတ်အာရုံထွေပြားခဲ့ကြပါလျှင်ကြည့်ဖို့အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ကြသည်။
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ (လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှု), ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေ (ဝတ်လစ်စလစ်အမျိုးသမီးများကို), ကြားနေပုံရိပ်တွေ (အဝတ်ကိုဝတ်သောမိန်းမတို့သည်), နှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံရိပ်တွေ (ကုလားထိုင်) - လေးဓါတ်ပုံများ၏အမျိုးအစားများရှိခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှာရှာဖွေနေအလားတူလေ့လာမှုများများတွင်စွဲသူတို့တစ်တွေကြားနေသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုပုံရိပ်ကိုနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်နှေးကွေးတုံ့ပြန်မှုအချိန်ရှိသည်ဆိုလိုတာကမူးယစ်ဆေး-related ပုံရိပ်တွေဆီသို့တစ်ခုအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုကိုပြသခဲ့ကြသည်။ ဒီမှာအယူအဆလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုကိုဘာသာရပ်များသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်. ထက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုအတွက်တူညီတဲ့အခြေခံအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုဖော်ပြရန်မယ်လို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုအတိအကျအရာဖြစ်တယ်။
မူးယစ်ဆေးလေ့လာမှုများနှင့်အတူအမျှအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအတှကျတစျခုဖွစျနိုငျသရှင်းပြချက်မက်လုံးပေးသင်ယူမှုသီအိုရီပါဝငျသညျ။ အများကြီးဂန္ထဝင်အေးစက်၏လုပ်ငန်းစဉ်များကဲ့သို့ပင်တွေကိုနှင့်ပျြောမှေ့စ neurochemical တုံ့ပြန်မှု (စသည်တို့ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, အရက်အလွဲသုံးစားမှု, compulsive လောင်းကစားဝိုင်းထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, porn အသုံးပြုမှုနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ကဲ့သို့) ၏ထပ်ခါတလဲလဲတွဲဖက်မှုနှင့်အတူ, ဘက်လိုက်တွေကိုတစ်ခုမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်မက်လုံးပေး-စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများဆည်းပူး - ထိုတွေကိုအဓိပ္ပာယ်တခြားအလုပ်တွေကိုကနေလူတစ်ဦးအာရုံပျက်, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းပြီးအရှင်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ဖြစ်လာသည်။ လွင်ပြင်စွဲဘာသာစကားမှာ: စွဲအမြင်အာရုံတွေကိုအားဖြင့် "အစပျိုး" နိုင်ပါသည်။
အသစ်သောသုတေသနတစ်ခုသတ်မှတ်နှင့်ကု သ. ရောဂါအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ထောက်ခံမှုအတွက်ပေါ်ထွက်လာအခါတိုင်းငါမကူညီနိုငျပေမယ်ယားနိုးနှင့်အရေးယူမည်သည့်အခါတွေးမိ။ ဒါကကျွန်မဒီမကြာမီအချိန်မရွေးပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်မျှော်လင့်ချက်မရဖြစ်၏ဟုဆိုလေ၏။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကိုရိုးရှင်းစွာသူတို့တက်တက်ကြွကြွနဲ့နားမလည်နိုင်လောက်အောင်အဆိုပါ DSM ထံမှစကားလုံးက "စွဲ" ဖျက်သိမ်းရေးပါတယ်အထူးသဖြင့်အခါ, တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရောဂါအကောင်အထည်ဖော်ရန်နိုင်ငံရေးအလိုတော်ကင်းမဲ့။ တောင်မှမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်စွဲလမ်းအမည်ပြောင်းပြီ။ အခုတော့သူတို့က "ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု Disorders ။ " ဟုခေါ်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်အပြောင်းအလဲကို? အမှန်တရားအတွက်, ကျွန်မမသိရပါဘူး, ငါယားက၎င်း၏ရပ်တည်ချက် reverse မယ်လို့အလိုရှိ၏။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, စွဲနီးပါးတိုင်းကုသမှုအထူးကု (အယားရဲ့ semantic လှောင်ပြောင်သရော်မှုတွေရှိနေသော်လည်း) အသုံးချနှင့်လည်းမိမိတို့ကိုယ်ကို addicts မှအများဆုံးသဘာဝကျပါတယ်သောဝေါဟာရကိုင်သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်ချိန်မှာယားဟာ 21 join ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်st တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး DSM ရောဂါအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ (သို့မဟုတ် hypersexual ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသို့မဟုတ်အခြားသမျှလူတွေကိုဒီကိုခေါ်ချင်) ရာစုနှင့်အတည်ပြု။ ထို့နောက်အချိန်အထိဘာမှအများကြီးအပြောင်းအလဲများကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, သူတို့ကအကောင်းဆုံးကိုသိရလမ်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကပိုသုတေသနပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်, နှင့် Stefanie Carnes, ကဲန်အဒမ်လိုလူကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, ငါ Clinician ပညာပေးအလင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ပြုမူဆက်ဆံသူကို Clinician, အထွေထွေအများသုံးဖြစ်ပြီး, လိင်စွဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့, ဤနာတာရှည်၏သဘောသဘာဝနှင့်ကုသမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး၎င်းတို့၏ချစ်ရသူ, debilitating နှင့်တိုးတက်သော neurobiological ရောဂါ။
တို့ကမူရင်းဆောင်းပါး ရောဘတ် Weiss LCSW, CSAT-S က
နောက်ခံသုတေသန Link ကို